Vakashela iBhutan Kusuka eBhubaneswar | Sitshele u-993-702-7574 ukuthi ubhale manje
Vakashela iBhutan - Injabulo yindawo
Ukulangazelela ukuvakasha kwemvelo okuyikho ngempela ethandweni elishaywayo? Vakashela iBhutan Kusuka eBhubaneswar, ngeSandle Amatshe! Kungakhathaliseki ukuthi usuku luni, inkathi, unyaka ofika lapha - Uqinisekile ukuthi unesikhathi esihle kakhulu sokuphila kwakho.
Umbuso we-Himalaya uhlala njalo uvumelana nezindinganiso zaso zasendulo kanye nezwe eliyimfihlakalo nemilingo, lapho umhlaba uhlangana khona nezulu. Kusukela emigqumeni yezintaba ze-snow-capped kuya ezintweni zasendle ezimangalisayo, ubuhle obunikelwayo emvelo lapha buzokunika isipiliyoni esingakulindeleki lapho uvakashela iBhutan Kusuka eBhubaneswar, ukuthi uzobazisa isikhathi sokuphila.
Sinikeza amaphakheji angcono kakhulu ukuvakashela iBhutan Kusuka eBhubaneswar okuhambisana nezithakazelo zakho, izintandokazi kanye nesabelomali. Ngakho-ke, lungela ukuthandana neyokugcina koMbuso we-Himalaya emhlabeni!
I-Paro - Thimphu - Punakha (i-05 Nights Program | Ikhodi Yokuvakasha: I-1017):
DAY 01: Fika Paro Nge-Druk Air & Ukudlulisela Ku-Thimpu (55Km, i-Approx.1.1 / i-2 Hours Drive)
Uhambo oluya eParo lungenye yezinto ezikhangayo kunabo bonke abase-Himalaya. Kungakhathaliseki ukuthi uhamba ngezindiza eceleni kwe-Himalaya uvela eK Kathmandu noma ngaphezu kwezintaba eziseKolkata, uhambo luveza imibono ethakazelisayo kanye nokuvela okuthakazelisayo eMbusweni. Isipho sokuqala saseBhutan njengoba uvela endizeni kuyoba epholile, umoya ohlanzekile wezintaba. Ngemuva kokuhleleka kokufuduka kanye nokuqoqwa kwemithwalo, uzothola ummeleli wethu, bese ngemuva kwalokho uhamba waya eThimphu, idolobha elikhulu laseBhutan lapho uhamba khona emgwaqeni eChuzom, lapho kuhlangana khona imifula yaseThimphu neParo. Isitayela ezintathu ezahlukene zezimbambo; IsiTibet, isiNepalese nesiBhutan sihlobisa le confluence.
Lapho ufika, ungene Thimphu hlola-ehhotela. Inhloko-dolobha yaseBhutan kanye nendawo kahulumeni, inkolo nokuhweba, i-Thimphu idolobha eliyingqayizivele elinomxube ongavamile wezokuthuthukiswa kwanamuhla kanye namasiko asendulo. Ngabantu abaningi mayelana ne-90,000 cishe mhlawumbe kusekhona umuzi omkhulu kuphela wezwe ngaphandle kokukhanya komgwaqo.
Kusihlwa ukuhamba okuhlolisisa okuzungeza umgwaqo omkhulu waseThimphu nendawo yemakethe ..
Ngobusuku ehhotela e-Thimphu. (I-Altitude 2,320 m)
Ngemuva kokudla kwasekuseni, uye eBuddha Point (KuenselPhodrang). Kutholakala esiteshini esifushane ukusuka eThimphu centre, izivakashi zingathola umbono omuhle wesigodi saseThimphu kusukela e-Buddha iphuzu (KuenselPhodrang). Ungakhokha ukukhuleka kwakho futhi unikeze imithandazo kuBuddha, isithombe esikhulu kunawo wonke kuleli zwe bese uhambahamba bese uthola umbono wesigodi.
Khona-ke, vakashela i-King's Memorial Chorten ngokuqhubekayo iqhutshwa abantu, ukukhononda kwama-mantra nokuguqula amasondo abo omthandazo. Ukwakhiwa kwalesi sigameko kwakuwumqondo wenkosi yesithathu yaseBhutan, uMbusi Wakhe uJigme Dorji Wangchuk ("ubaba waseBhutan wanamuhla") ozimisele ukubeka isikhumbuzo sokuthula emhlabeni nokuchuma. Eqedile ku-1974 ngemuva kokufa kwakhe okungazelelwe, isebenza njengesikhumbuzo eNkosini yaseLate futhi njengesikhumbuzo sokuthula.
Emva kwalokho vakashela e-Exhibitory Heritage and Folk Heritage, ubufakazi obuhle bemasiko aphilayo eBhutan.
Thumela isidlo sakusihlwa, vakashela i-National Library, uhlalise iqoqo elibanzi lemibhalo yesandla yaseBuddhist engadingeki ne-Institute for ZorigChusum (eyaziwa ngokuthi iSikole Sokudweba) lapho abafundi baqhuba inkambo yokuqeqesha i-6 eminyakeni yobuciko nobuciko bendabuko ye-13.
Bese, shayela ku-Takin Preserve. I-Takin yisilwane sesizwe saseBhutan, futhi sibonakala njengesiphambano phakathi kwenkomo nembuzi.
Kamuva ntambama eTrashichhoedzong, "inqaba yenkolo ekhazimulayo". Lesi yisikhungo sikahulumeni nenkolo, indawo yesikhala sobukhosi sekosikazi kanye nesihlalo sikaJe Khenpo noma u-Chief Abbot. Eyakhelwe ku-1641 ngumbumbano wezombangazwe nezenkolo waseBhutan, uShabdrung Ngawang Namgyal, lakhiwe kabusha kuma-1960 ngendlela yaseBhutanese yendabuko, ngaphandle kwezipikili noma amapulani ezakhiwo.
Isikhathi sakusihlwa singasetshenziswa ukuhamba ngemisebenzi yezandla zikahulumeni ezenziwa ngu-Emporium nezengcweti zendawo zendawo yezitolo, ukuze zihlole ngokusebenzisa ubuciko obuhle bendabuko beBhutan. Lapha ungathenga izindwangu ezenziwe ngezandla, imidwebo ye-thangkha, imaski, i-ceramics, islate kanye nemidwebo yezinkuni, ubucwebe, izinto ezithakazelisayo ezenziwe ngezinto zokwakha.
USUKU 03: Thimpu - Punakha & Wangduephodrang (75 Km, Approx. 3Hours Drive)
Ngemuva kokudla kwasekuseni, hamba ukuya ePunakha / Wangduephodrang ngaphesheya kwe-Dochu La. Ebude be-3,088m / 10,130 ft, ​​i-Dochula yindawo enhle ngokukhethwa, udonga lwamanothi, namaplagiza omthandazo okuhlobisa leli phuzu eliphakeme emgwaqeni. Uma izibhakabhaka zicacile, kungase kwenzeke ukubona lezi ziqongo ezilandelayo kusuka kulolu daba ngokulandelana kwesobunxele kuya kwesokudla: Masagang (7,158m), Tsendagang (6,960m), Terigang (7,060m), Jejegangphugang (7,158 m), Kangphugang (7,170 m) , I-Zongphugang (7, i-060 m), intaba etafuleni ephethe isifunda esikude saseLunana - ekugcineni i-Gangkar puensum, ephakeme kakhulu eBhutan ku-7,497m.
Ukuvakashela iPunakha Dzong noma i-Palace of Happiness Great, kusihlwa nge-1637 nguShabdrung Ngawang Namgyal, emaphethelweni emifula yasePhochu naseMchuchu. Lezi zindawo eziphakeme zisebenza njengezikhungo zenkolo nezokuphatha eBhutan esikhathini esidlule. Ilinganisa ezinye ze-600 ngamasenti angu-240 futhi inombhoshongo onamateka ayisithupha, ophethe igolide. Ngaphakathi kukhona amagceke kanye nezakhiwo zenkolo ezikhomba ukujula komlando kanye nesiko elingokomoya lapha. Umhlahlandlela wakho uzokukhanyisa ukuqonda kwakho kwalesi siko esiyinkimbinkimbi esiyinkimbinkimbi kithi, nakuba isikhathi eside sisungulwe lapha.
Kamuva ngosuku lokuvakashela u-Chimi Lhakhang.
I-Chimi Lhakhang, ehlala e-hillock enkabeni yesigodi, iyaziwa nangokuthi ithempeli lokuzala. Kukholelwa kakhulu ukuthi imibhangqwana engenazo izingane futhi efuna eyodwa, uma ithandaza kulethempeli, ijwayele ukubusiswa ngengane kakhulu maduzane. Ukuhamba emzaneni oseduzane nethempeli kuzokunika izinto ezingavamile zokuphila kwansuku zonke nokuphila kwabantu bakuleli.
Ngobusuku ehhotela e-Punakha / Wangduephodrang. (I-Altitude 1,300m)
DAY 04: Punakha & Wangduephodrang - Paro (125 Kms, Approx. 4.1 / 2Hours Drive)
Ngemuva kokudla kwasekuseni emuva kokubuyela e-Paro ehlehla emuva esuka e-Dochu La, landela indlela yokubuyela emuva emagodini amafula e-Wang Chhu naseParoChuhu, ngaphambi kokuwela edolobheni laseParo ukuya enyakatho ekugcineni kwesigodi.
Ngomgwaqo uvakashela iSimtokhaDzong, enye yeqhawe elikhulu kunazo zonke kulelizwe futhi laziwa njengendawo yokufundisa okujulile i-tantric. Le ndawo manje ihlala nesikole sokufunda ulimi lweZuzongkha.
Kamuva ngosuku olulandelayo ehlola ehhotela, qhubeka uvakashela eTa Dzong, owaqala ukwakha njenge-Nqabayokulinda, manje enezindlu zeNational Museum. Iqoqo elibanzi lihlanganisa ukudweba kwe-antique thangkha, izindwangu, izikhali nezikhali, izinto zendlu kanye nokuhlanganiswa okucebile kwempahla yemvelo nemlando.
Bese uhamba umgwaqo uvakashele i-RinpungDzong, okusho ukuthi "inqaba yensimu yamatshe"), onomlando omude futhi othakazelisayo. Phakathi kwezemibukiso yezinkuni ezigceke egcekeni elingaphakathi kukhona imidwebo emihle yodonga olubonisa ukugqithwa kweBuddha njengabangane abane, indoda endala yokuphila eside, isondo lokuphila, izigcawu ezivela eMilarepa, eNtabeni. Sumeru nezinye i-Mandala ye-cosmic.
Ngobusuku ehhotela e-Paro. (I-Altitude 2,280m)
DAY 05: I-Paro
Ngemuva kokuhamba kwasekuseni ku-Taktshang Monastery (cishe ukuhamba kohambo lwezinsuku zamahora angu-5). Ngenye yezindawo ezidumile kakhulu zezindunankulu zaseBhutan, ezibheke eceleni kwe-900m emgwaqeni ngaphezu kwesigodini saseParo. Kuthiwa uGugu Rinpoche wafika lapha ngemuva kwe-tigress futhi wacabanga kule ndlu yezindela ngakho-ke ibizwa ngokuthi 'isidumbu sikaTiger'. Leli sayithi libhekwa njengendawo engcwele kakhulu futhi livakashelwe nguShabdrung Ngawang Namgyal ku-1646 futhi manje livakashelwa yiBhutanese okungenani kanye ngesikhathi sokuphila.
Ngemuva kokudla kwasekuseni, ukushayela uhambo lwe-Chelela pass.
I-Chele la (ukudlula), ekuphakameni kwe-3,988 amamitha kubhekwa njengenye yezindawo ezihamba phambili ezihamba ngezimoto eBhutan. Cishe ngehora lesishiyagalolunye emgwaqweni omkhulu, kukhona le Phasi-ipharadesi yezitshalo. Iphaseli inikeza imibono emangalisayo yentaba engcwele uJomolhari noJichu Drake. Kuphawulwe ngamakhulu amaphulogi omthandazo aqhutshwa emoyeni. Lapha, izivakashi ziyakwazi ukubona izimbali ze-roses zasendle, izimpuphu ezibomvu neziphuzi, futhi zihlambalaza nge-blue iris ejulile ehlanganisa phansi kwehlathi. I-top of the pass bloom nge rhododendrons ezinhlobonhlobo imibala-pink ophaphathekile, pink ejulile, elishisayo orange, mauve, ezimhlophe kanye obomvu.
Kamuva ekuhambeni komgwaqo ukuya e-DzongdrakhaGoempa. Ngokuvamile okuthiwa yi-mini Takstang, iDongdrakha iyinkimbinkimbi ehlangothini olusentshonalanga yeParo Valley. Izikhonkwane ezine zakha i-complex, ezinikezelwe kuDrolma (Tara), Tsheringma (Owesifazanekazi wesikhathi eside), Guru Rinpoche kanye noBuddha wekusasa, uMaitreya. Isiko somlomo sasekhaya sathi lapho iGupo Rinpoche kuqala efika eBhutan, weza eNepal, efika kuqala eDrakarpo, bese i-Dzongdrakha ngaphambi kokufika eKattshang (iTiger's Nest) ngasenyakatho kuze kube semfuleni. Kutholakala ku-20 idrayivu yokuhamba ngemaminithi ukusuka eParo, lezi zithempeli zakhiwa emgodini ngenhla kwesigodi saseBondey kodwa ukuhamba akuyona into eqinile njengoTattshang.Ngomgwaqo, kuthatha imizuzu engu-30 kuphela ukuhamba lapha, ngokusebenzisa amahlathi e-rhododendron nemithi yama-oak nezinkawu ezimhlophe kuso. I-Dzongdrakha nayo ibamba i-Tshechu (umkhosi) wonyaka owenziwa ngosuku olulandelayo nangosuku olulandelayo eParoTshechu enkulu egcinwe e-RinpungDzong eduze kwedolobha elikhulu. Ngesikhathi somkhosi e-Dzongdrakha, esinye sezibusiso eziyinhloko senzeke lapho kutholakala i-Buddha (stupa) yeBuddha edlule ukuze abantu bajabule yi-relic egcinwe ngaphakathi. Umzana wase-Dzongdrakha unamathempeli amaningi futhi uyaziwa ukuthi iningi labesilisa lawo laba ngamakholisi noma ama-gomchens agcotshiwe ngokugcwele (beka amakholi angathathi izithembiso zesibambiso). Kuyaphawuleka ukuthi yibo besifazane abasebenza emasimini futhi abayitholi isinkwa abafani nanoma iyiphi enye ingxenye yezwe.
Ngesonto ntambama ukuya eDrukgyelDzong, inqaba enqotshwe lapho amabutho aseBhutan elwa nabahlaseli baseTibet emakhulwini eminyaka adlule. I-dome eqhwaqha yeColmolhari engcwele, "intabakazikazikazikazi" ingabonakala kuyo yonke inkazimulo yayo kusukela emgwaqweni oya e-Dzong.
Ngendleleni, vakashela i-7th leminyaka KyichuLhakhang, enye yamathempeli e-108 akhiwe e-Himalayas ngeNkosi yaseTibetan, SongtsenGampo. Ukwakhiwa kwalithempeli kubonisa ukufakwa kobuBuddha eBhutan.
Kusihlwa ukuhamba okuhlola okuzungeze umgwaqo omkhulu kanye nomakethe.
DAY 06: Susa i-Paro
Ngemva kokudla kwasekuseni kwasekuseni ehhotela, shayela esiteshini sezindiza yendiza kuya endaweni oya kuyo. Ummeleli wethu uzokusiza ngezimiso zokuphuma bese ekucela ukuthi uhambe.
IZINSUKU ZOKUFAKA ZAMANYE AMAKHOSI EZIKHULULEYO ITINERARY:
• I-Ta Dzong - Paro (iminyuziyamu kazwelonke): ivaliwe ngamaholidi kaHulumeni
• Umtapo Wezincwadi Zikazwelonke - Thimphu: uvaliwe ngeSat, i-Sun & kumaholidi kaHulumeni
• I-Textile Musuem - Thimphu: Ivaliwe ngamaholidi kaHulumeni naseSun. Nge-Sat evulekile kusuka ku-9.00 kuya ku-4 pm
• Isikhungo seZorig Chusum (ISikole Sobuciko Namakhono) - Thimphu: Kuvaliwe ngamaHholide noHulumeni. Nge-Sat evuliwe kusuka ku-10 kuya ku-12 ngehora. Futhi kuvaliwe ebusika / ehlobo (Ngaphambi kuka-Mashi, ngoJuni-Aug - usuku lokuvala lukhona kuphela amasonto ambalwa ngaphambi).
• I-Simply Bhutan - Thimphu: Ivaliwe ngeSuku NamaHhovisi KaHulumeni
• I-Ta Dzong - I-Trongsa: ivaliwe ngeSonto eledlule naseHhovisi likaHhovisi likaHulumeni
• I-Taktsang Monastery (I-Tiger's Nest) - I-Paro: Valiwe ngo-Tue
(Lokhu kubuyekezwa okwamanje okutholakala kolwazi lokuvala / lokuvula kungashintsha njengenqubomgomo ye-Govt)